Aad soo dhawoow Our dukaanka!
Goodyear kabaha ammaanka dhismaha Welt
Iska yaree sare
kabaha roobka PVC
Waa maxay doorka calaacalaha double of kabaha shaqada?
In isku dhafan ee wax kaliya ee kabaha hadda, calaacalaha double uu noqday xalka ugu haboon oo ugu wanaagsan. Ilaalinta calaacalaha waxaa lagu gaarayaa by qaab iska caabin ah ay xirtaan iyo anti-warqada of tahay Addidas ah, kaas oo la ogaaday by sifooyinka iftiinka iyo jilicsan ee midsole ah ee. Raaxada marka socda.
Laga bilaabo halkan of view, isku darka ugu fiican hadda waa RU / PU, iyadoo la isticmaalayo caag (RU) inay tahay Addidas ah, polyurethane (PU) ka dhigi doonaa sida midsole ah, ka dibna iyada oo koolo ama lagala kulmo kiimikada shaqada iyo shaqada lagala kulmo ee PU laftiisa bonds ah Addidas oo si midsole ah. Dabcan, calaacalaha sare ee kabaha ayaa sidoo kale lagu qoray karaa, la safeeyey, oo wuxuuna ku xardhay.
Waxa kale oo jira isku-dar ah wax kaliya, kuwaas oo PU / TPU (polyurethane / polyurethane thermoplastic). Waa raaxo leh in ay xirtaan. Waxaa intaa dheer, isticmaalka polyurethane thermoplastic in ay sameeyaan tahay Addidas oo la kulmo baahida samaynta casriga ah, maxaa yeelay, calaacalaha of TPU sameeyey soo saari karaan kaliya ah midabo, iyo habka xardho on calaacalaha ayaa sidoo kale la kala duwanaayeen karo.
Kale oo kaliya double-lakabka ah PU / PU (polyurethane / polyurethane) wax isku darka sameeyey, ee Addidas iyo midsole ka samaysan yihiin polyurethane. Waayo, Addidas oo ah, wax polyurethane gaar cufan waa in la isticmaalaa si ay u ilaaliyaan sifooyinka iska caabin ah ay xirtaan ee Addidas ah. Waayo, midsole ah, polyurethane ka xumbaynaysa waa in la soo xulay raaxo.
waqti Post: Dec-24-2018
NO.7555 jidka Xingyuan, Zhanglu, magaalada Gaomi,
magaalada Weifang, gobolka Shandong, Shiinaha